အစ္စလာမ်သာသနာတော်နှင့် Slavery (၁) « ကုရ်အာန့် သုတ - Quranic Knowledge Blog - Weekly Articles
October 16th, 2010 by U Soe Lwin
အစ္စလာမ်သာသနာတော်နှင့် Slavery (၁)
In Quranic Knowledge, Tags: Islam slavery Tweetအစ္စလာမ်သာသနာတော် က ကျွန်စနစ် (Slavery) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အ မိန့်တော်ပြဋ္ဌာန်းသွန်သင်ဆုံးမထားသလဲ ဆိုတာကိုမ တင်ပြ ခင် ၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာတွင်ခဲ့ တဲ့ ကျွန်စနစ် (Slavery) အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးတင်ဆက်လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ ကျွန်စနစ် (Slavery) ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျွန်စနစ် (Slavery) ဟာ ဘယ်တုန်းက၊ ကမ္ဘာ့ ဘယ်ဒေသ မှာစပြီးအခြေ တည် ပေါက်ဖွား ရှင်သန်လာတယ်ဆိုတာ သမိုင်းအထောက် အထားအတိအကျ မရှိပေမဲ့ ၊ သမိုင်း သုတေ သီတွေ ရဲ့သုတေသန ပြု ချက် အရတော့ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ အစောဦးဆုံး ကျွန်စနစ် ဟာဘီစီ ၁၈ရာစု-၁၂ရာ စု လောက်က တရုတ်ပြည် ရှန်မင်းဆက်ခေတ် မှာကတည်းကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။ဒါ ဟာလည်း historical fact တော့ မဟုတ် ပါဘူး ၊ theorized hypothesis တစ်ခု သာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်စနစ်အောက်ကိုကျွန်တွေ အဖြစ် ဘယ်လိုလူတွေကရောက်သွားသလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ် သတ်ပြီး ပြောရရင်တော့ဥပမာ-တစ်ဖက် နဲ့တစ် ဖက်စစ် တိုက် လို့ ဖမ်းမိတဲ့စစ်သုံ့ ပန်းတွေ ၊ ကျွန် အဖြစ်ပြုဖို့အတွက် တမင်တကာကြံရွယ်ဖမ်းဆီးရာမှာ ခံရ တဲ့ သူတွေ ၊ ကြွေး ဆယ် မြီချ ပြုရာမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကြွေးမဆပ်နိုင်တဲ့သူတွေ စတာတွေပါ။ ဒီ ကျွန်စနစ် ဟာ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းတစ် လျှောက် နေရာဒေသတိုင်း ၊ ယဉ်ကျေး မှုတိုင်းမှာ ရှိခဲ့တဲ့ စနစ်ဆိုးကြီး တစ်ခု ပါဘဲ။
အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာလည်း ဒီကျွန်စနစ်ဟာ တမန်တော်မုဟမ္မဒ် မပွင့်ပေါ်မှီကတည်း ကိုက တည်ရှိနေ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နည်း ဆိုရရင် စကြ ဝဠှာဆိုင်ရာ သာသ နာတော်ဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ် ရဲ့ အန္တိမ ဥပဒေပြ ဋ္ဌာန်းချက် မတည်ခင် ကတည်းကို က ကျွန်စနစ် ဟာအာ ရေဗျလူ့အဖွဲ့ အ စည်းမှာ ခြေခြေခိုင်ခိုင် အမြစ် တွယ်ရင့်သန်နေ ခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ဒါကြောင့် အစ္စလာမ် သာသနာ ဟာ ကျွန်စနစ် ကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ သာသနာ မဟုတ် ကြောင်း ဦးစွာပထမ သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန်လည်မဆန်းသစ်မီ က အာရေဗျ မှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ အယူဝါဒ အရ သော် လည်းကောင်း ၊ ယဉ်ကျေး မှု အရသော် လည်းကောင်း ၊ လူမှုကျင့် ဝတ် ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေမှာလည်းကောင်း တော်တော်ကြီးကို အောက်တန်းကျနေခဲ့ပြီး အရမ်း ကာရော ကို ပရမ်းပတာ ဆန် လွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အာရေဗျ မှာရှိတဲ့ကျွန်စနစ် ဟာ လည်းဘဲအလွန် တရာလူသားမဆန် ကြမ်းကြုတ်လှတဲ့နေရာမှာ ဂရိ၊ရောမတို့ထက် အဆင့်မနိမ့်ခဲ့လှပါဘူး။ အဲဒီလိုအချိန်၊အခြေအနေမှာမှ ကိုယ်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဟာရစူလ် တမန်တော်အဖြစ် ပွင့် ပေါ်တော် မူခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီလိုပွင့်ပေါ်လာပြီး အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ပို့ချတော်မူတဲ့ သတင်း စကား ၊ ဥပဒေ တို့ကို လူသားအပေါင်းတို့ အား ဖြန့်ချီသင်ကြား သာသနာပြုပြဋ္ဌာန်း တဲ့ နေရာမှာ ၊ ကြီး စွာတဲ့ ဖောက် လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ် ၊ အကွပ်မဲ့ကြမ်းပမာ ရမ်းခါနေတဲ့ အာရဗ်လူ့အဖွဲ့ အစည်း ကြီးကို စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု ၊လူ့စနစ်ယဉ်ကျေးမှု အဖြစ် တစ်ခ ဏခြင်း တစ်မု ဟုတ် ခြင်း ပြုပြင် ထူထောင် ခဲ့ရတာ မဟုတ် ဘဲ ၊ တစ်ဖြည်းဖြည်း တစ်စတစ်စ နဲ့ screw ရစ် သလို တစ် ရစ်ခြင်း တစ်ဆင့်ခြင်း ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့သာဓ ကမျိုးတွေ လည်းရှိပါ တယ်။ ဒါဟာလည်း စကြဝဠှာအပေါင်းရဲ့ သခင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ရဲ့ “ဟိက်မသ်” တော်ဖြစ် ပါတယ်။
ဘာကိုဆိုလို သလဲ ဆိုတာ ဥပမာပေးရရင်- အရက်သေစာ သောက်စား ခြင်းအမှုကို အ ထူးခုံ မင်တွယ်တာနေတဲ့ အဲဒီအချိန်က အာရဗ် လူ့အ ဖွဲ့အ စည်းကို ရုတ်တရက် ကြီး “အရက် မ သောက်ရ” လို့ယတိ ပြတ် “ဟရာမ်” ပြုတားမြစ်တာမဟုတ်ဘဲ ၊ ပထမ-အရက်သေစာ နဲ့ လောင်းတမ်း ကစားခြင်း မှာ အပြစ်များများရှိပြီး ၊ အကျိုးလည်း နည်းနည်း ရှိကြောင်း၊ သို့သော် အကျိုးထက် အပြစ်ကပိုမိုများပြားကြောင်း (၂:၂၁၉) ၊ ဒုတိ ယ- အရက် မူးယစ် နေရင် ဆွလားသ် ဝတ်ပြုမှု အနားသို့ချဉ်းကပ် ခြင်းမပြုရကြောင်း မိန့်တော်မူပြီး ၊ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ (၅:၉၀-၉၁) ကျတော့ မှ အရက် သေစာ သောက် စားခြင်း လောင်းတမ်းကစားခြင်း “ဟရာမ်” လို့ဥပဒေပြ ဋ္ဌာန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို စောဒက တက်ချင်သူ ဘက်က စော ဒနာ မှု လေးတွေရှိ လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒီလိုပါ……
“အစ္စလာမ်သာသနာက တားမြစ်ချက် ဥပဒေတွေကို တစ်ချက်တည်းယတိပြတ် ချမှတ် ပြ ဋ္ဌာန်းခဲ့တာမဟုတ်ဆိုရင် “ရှိရ်က်” မပြုရဆိုတဲ့ ဥပဒေ ကို တော့ဘာလို့များယတိပြတ်တစ် ချက်တည်း သတ်မှတ် ခဲ့ တာပါလဲ?”
အဲဒါ ကို ဖြေမှာက… ဟုတ်ပြီ…..
ပထမဦးဆုံးသတိပြုရမှာက….ရေးခဲ့တဲ့အထဲမှာအစ္စလာမ့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တိုင်းကို အဆင့် ဆင့်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ” လို့ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ “တစ်ဖြည်း ဖြည်း တစ်စ တစ်စ နဲ့ screw ရစ် သလို တစ်ရစ်ခြင်း တစ်ဆင့်ခြင်း ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့ သာဓကမျိုးတွေလည်းရှိ ပါတယ်။” လို့ရေးခဲ့တာပါ။ အစ္စလာမ် သာသ နာတော် အရ ကမ္ဘာ့ အလင်းဆောင် သာသနာပြု တမန်တော်တွေ ပွင့်ပေါ် လာခဲ့ရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်ကြီး က “သောဝ်ဟီဒ်” တရား စစ်ကို တည် စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
“သောဝ်ဟီဒ်” နဲ့ အပြိုင်လည်းဖြစ် ၊ လားရာလည်းမတူ တဲ့ “ရှိရ်က်” အမှု နဲ့ ပတ်သတ်လို့က တော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် က တစ်ဆင့်ခြင်းအမိန့်မပြဋ္ဌာန်း ပါဘူး။ အစ္စလာမ်ရဲ့ အဓိက အုတ်မြစ်ဖြစ် တဲ့ “သောဝ်ဟီဒ်” ကို ဦးဆုံး ပြုဖို့ရာ သာသနာပြု တမန် တော်များ ပွင့်ပေါ် လာရခြင်း (“ရိစာလသ်”) ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း ပွင့်ခဲ့သမျှ တမန်တော်တိုင်းဟာ “ရှိရ်က်” နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆင့်ဆင့် ဟောကြား သာသနာပြုခဲ့ တာမျိုးမရှိပါဘူး။ ပွင့်ခဲ့သ မျှ တမန် တော်တိုင်းဟာ “လာအိလာဟအိလ္လလ္လာဟ်” (အလ္လာဟ် မှ အပအခြား ခဝပ်ကိုးကွယ် စရာ အလျှဉ်းမရှိ) “အနရစူလုလ္လာဟ်” (ငါသည် အလ္လာဟ် ၏ တမန်တော် ဖြစ်သည်) လို့ဦးစွာကျွေးကြော်ခဲ့တာချည်းပါဘဲ။
ဒီလိုဆိုရင်……မေးချင်သူ ဘက်က နောက်မေးခွန်းတစ်မျိုး….ဒီလို “ဒါဆို…..”ဝက်သားမစားရ” ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကရော ဘာလို့အဆင့်ဆင့် မဟုတ် ခဲ့ပါသေးလဲ?”
ဝက်သားမစားရ ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကျတော့….”အသေသား” ၊ “သွေး” ၊ “ဝက်သား” စတာတွေဟာ လူကို စွဲလမ်းမှုကျေးကျွန် မဖြစ်စေပါဘူး။
အရက်သေစာ ၊ လောင်းကစား တို့ကျတော့ ဆေးသိပ္ပံပညာရပ် ရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရဆို ကြီးမားတဲ့စွဲလမ်းမှု ကို အမြစ်တွယ်စေ တဲ့ အရာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုလိုတာက- “အသေသား” ၊ “သွေး” ၊ “ဝက်သား” တို့ကို သက်တမ်းပတ် လုံးခုံခုံမင်မင် တွယ်တာ စွာစားသုံးလာတဲ့ လူတစ်ယောက် ဟာ အဲဒါ တစ်ခုခုကိုကာလ အကန့်အသတ်မရှိ မစားမသောက်ရလည်း ထူးထူးခြားခြား ဘာမှဖြစ်သွား မှာမဟုတ်ပေမဲ့ ၊ အရက်သေ စာလောင်းတမ်း က စားခြင်းကိုတစ်သက် လုံးခုံခုံမင်မင်တွယ်တာစွာ ပြုလာတဲ့ လူမျိုးကျတော့……..။ အဖြေရပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက…… အစ္စလာမ်သာသနာမှာ “ယတိပြတ်” တစ်ချက်တည်း တားမြစ်ထား တဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက် မျိုးလည်းရှိသလို ၊ အဆင့်ဆင့် မကောင်းကျိုး ကို ဖော်ပြပြီးမှ တားမြစ် လိုက်တဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးလည်းရှိရုံမက ၊ တားမြစ်ထားပေမဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ် မှာ ပြုခွင့်ရှိတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးလည်း ရှိပါ တယ်ဆိုတာ သိရပြီးပါပြီ။ (မှတ်ရန်။ “အသေသား” ၊ “သွေး” ၊ “ဝက်သား” စတာတွေကို အခြေအနေတစ်ရပ်မှာတော့ စားသုံးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
အကျယ်သိချင်ရင် အာယသ်တော် (၂:၁၇၃) ၊ (၅:၃) ၊ (၆:၁၄၅) ၊ (၁၆:၁၁၅) တို့ကို လေ့လာပါ။)
ကျွန်စနစ် နဲ့ ပတ်သတ်တာကို အခုဆက်ပါတော့မယ်……အစ္စလာမ်သာသနာ က ကျွန်စနစ် ကို လူ့အဖွဲ့ အစည်းကြီးတစ်ရပ်လုံး အတွက် မရှိသင့်တဲ့ စ နစ်တစ်ခုလို့ အပီအပြင် အသိအ မှတ်ပြု ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…..ထူးခြားတာကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ် အာန် မှာရော ၊ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ရဲ့ ဆွဟီးဟ် ဟဒီးစ် တော်တွေမှာ ရော ကျွန်စနစ် ကိုလုံးဝ ပိတ်ပင်တားမြစ်တဲ့ အာ ယသ်တော် ဩဝါဒတော် တွေ လည်း မပါရှိသလို ၊ ကျွန်စနစ် ကို မုစ်လင်မ် တွေ အနေနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် အကောင် အထည်ဖော် ရမယ် လို့ ဆိုလိုတဲ့ အာယသ်တော် ၊ ဩဝါဒတော်တွေလည်းလုံးဝ မပါပါဘူး။ ဒီလိုဆိုပေါ် လာပြန်ပြီ မေးစ ရာက….
“ဒါဆိုဘယ်လိုလဲ? ဒီလောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မအပ်စပ်တဲ့ ၊ မရှိသင့်တဲ့ ဒီစနစ်ဆိုး ကြီးကို အစ္စလာမ် က ဘာလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားမတားမြစ် ထားပါ သလဲ?”
ဟုတ်ပြီဗျာ…..ဒီမေးခွန်းကတော့ အလွန်ကို မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းပါ။
« ဇနီးကိုရိုက်ဆုံးမခြင်းဆောင်းပါး အပေါ်ဆွေးနွေးချက်များ။(၂)